Guddoomiye Jawaari oo Farmaajo kadiiday inuu is Casilo – Radio Daljir
Guddoomiye Jawaari oo Farmaajo kadiiday inuu is Casilo
Abriil 3, 2018 3:43 g 0
Guddoomiyaha Golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho,waxaana uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo mooshinka isaga ka dhanka ah.
Guddoomiye Jawaari ayaa sheegay in Madaxwweynaha uusan dhex dhexaad ka ahayn khilaafka Jawaari iyo ku xigeenkiisa.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in wadahadalladii u dhaxeeyay labada dhinac ee uu madaxweynaha dhex dhexaadinayay uu fashilmay.
Waxaa uu intaas ku daray in Madaxweynuhu ka dalbaday in uu iscasilo hayeeshee uu Jawaari sheegay in uu ka diiday taas islamarkaana uusan is casileyn.
Guddoomiye Jawaari ayaa ugu dambeyn ka digay Shirka Golaha shacabka ee Berri loogu ballansanyahay xarunta Golaha shacabka,waxanaa uu xusay in isaga uu mas’uul ka yahay xaruntaas.
Wasiirka Maaliyadda DFS oo sheegay inay dhisayaan Xarun lagu barto dhaqaalaha